Ubuntu 21.10: GNOME 40, Linux 5.13 uye inotsigirwa kwemwedzi 9 | Linux Vakapindwa muropa
Ubuntu 21.10 yakaburitswa neGNOME 40, Linux 5.13 uye yakatsigirwa kwemwedzi mipfumbamwe
Pablinux | 14/10/2021 20:45 | Noticias
Vashandisi ve KDE vari kupemberera nhasi iyo 25th kupemberera kwepurojekiti. Kune vashandisi veKubuntu, nhasi bato iri yakapetwa kaviri, sezvo vhezheni itsva yehurongwa hwayo yaburitswa (yakamirira kuitwa yepamutemo). Uye ndeyekuti nhasi Gumiguru 14 raive zuva iro mhuri yeImpish Indri yaifanira kusvika nayo Ubuntu 21.10 kumusoro. Kunyangwe iri yakajairwa kutenderera kutenderera, kusvetuka kwakakosha, mune izvo graphical nharaunda ine zvakawanda zvekutaura.
Pa Ubuntu 20.10 uye 21.04, Canonical yakashandisa GNOME 3.38. Epreli apfuura vakasarudza kusaenda kumusoro GNOME 40 nekuti shanduko zhinji dzakange dzaunzwa uye GTK 4 yaive ichitora nhanho dzayo dzekutanga, asi izvozvi zvese zvakura kwazvo uye vakagadzirisa GNOME Shell. Chiri kunyanya kukatyamadza kuita kwekubata kwepaneru, asi kune dzimwe nhau.
Ubuntu 21.10 inoita iyo leap kuGNOME 40
Pakati pezvinhu zvitsva zvekuburitswa kutsva tinofanirwa kugara tichitaura kernel, uye Ubuntu 21.10 inoshandisa Linux 5.13. Iyo kernel inonyanya kuvandudza rutsigiro rwehardware, asi izvo zvaunozoona iwe uchangotanga Impish Indri mune yayo huru vhezheni ndeyeGNOME 40, ine yayo nyowani nyowani pane yekubata pani kuti upinde iyo yekushandisa dhirowa kana shandura desktop, marara anogona mune dhoku, inochengetwa kuruboshwe, kupatsanurana pakati peanofarira maapplication uye ayo asiri uye isu takavhura, rumwe ruzivo kubva kuchikwata mu «About», kana nyowani Yaru theme.
Nezve izvo zvinoshandiswa, zvinoratidzika kuti zvimwe zveGNOME 40 uye zvimwe zveGNOME 41 zvinoshandiswa, izvo Firefox (93) inoshandisa iyo snap vhezheni nekusarudzika kana zvimwe zvinogadziridzwa, seThunderbird 91 kana LibreOffice 7.2.1. Izvo zvakakoshawo kutaura kuti iyo nyowani nyowani inowanikwa, asi muUbuntu 21.10 inongowanikwa chete senge sarudzo; muna 22.04 ichave isipo. Uye zvakare, uye sekusunungurwa kwese kutsva kubva kudzoka kwayo kuGNOME, mashandiro akagadziridzwa.
Ubuntu 21.10, inova yakasununguka kutenderera uye ichatsigirwa kwemwedzi mipfumbamwe, ikozvino iripo kubva ku Iyi link, uye zvakare mu website yepamutemo yeiyo inoshanda system.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Ubuntu 21.10 yakaburitswa neGNOME 40, Linux 5.13 uye yakatsigirwa kwemwedzi mipfumbamwe